भनिन्छ एकाधिकार उद्यम, एक विशिष्ट बजार मूख्य स्थिति कब्जा जो। यो उहाँलाई अन्य निर्माताहरु देखि बजार रोकन द्वारा लाभ उठाउन र ग्राहकहरु गर्न सर्तहरू गरिदिएको गर्न अनुमति दिन्छ।
प्राकृतिक एकाधिकार किनभने यसको उत्पादन को प्रकृति को बजार विशेष अवस्था लाग्छ। यो धेरै महंगा उपकरण, प्राकृतिक स्रोतहरू, असाधारण प्रविधि र शक्ति सीमा को एकमात्र स्वामित्व प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ। यो लिन्छ माल बजार को 65% यदि कम्पनी को मूख्य स्थिति, भनिन्छ।
नियम, प्राकृतिक एकाधिकार - यो एक विकसित पूर्वाधार, पुन: सिर्जना धेरै गाह्रो र uneconomical जो संग धेरै ठूलो उद्यम छ। उदाहरणका लागि, रेल, शक्ति र गर्मी, आदि को लागि सबैभन्दा monopolies बस देश भर अर्थव्यवस्था को कामकाज लागि अपरिहार्य छन् जो सार्वजनिक उद्यम, छन्। यस्तो उद्यम लागि, उद्योग प्रवेश गर्न हटाउन हुनुपर्छ भनेर एक उच्च सीमा द्वारा विशेषता।
यसको बजार एकाधिकार अस्तित्व निर्यात अवसर मा एक कमी गर्न जान्छ जो पूर्ण प्रतियोगिता, विकास hinders जसमा रूस मा स्थिति। सोभियत अवधिमा आर्थिक व्यवस्थापनको आदेश सिस्टम सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था अब शब्द "प्राकृतिक एकाधिकार" परिभाषित गर्ने एक तथ्य छ जब। त्यसपछि सिद्धान्त कुनै प्रतियोगिता थियो, एक व्यापक नीति योजना संचालित। Gosplan, राज्य समिति र राज्य प्रावधान देश उद्यम सबै सञ्चालन मापदण्डहरू सेट।
प्राकृतिक एकाधिकार पनि एक विशेष प्रकार रूपमा मानिन्छ बजार संरचना सामान जसमा यस्तो तरिकाले उठाएको आफ्नो अन्य विषयहरुमा प्रवेश गर्न बाधा कि वस्तुतः दुर्गम को।
यस समाजवादी एकाधिकार एक विशिष्ट सुविधा पूंजीपति संसारमा तिनीहरूले प्रतियोगिता द्वारा र सँगसँगै "तल" निस्कनु गर्न थाले, जबकि तिनीहरू, "माथिबाट" लगाइयो थियो (तिनीहरूले उन्नत प्रविधि र बलियो प्राविधिक आधार एक अग्रणी कम्पनी भङ्ग)।
पैतृक sotsepohi हदसम्म देश आर्थिक सम्बन्ध को थप विकास निर्धारित। Antimonopoly कानून रूस बलियो मूख्य उद्यम र नवजात बजार सम्बन्ध को अस्तित्व को अवस्थामा विकसित भएको थियो। आज, यो सही टाढा छ र कानुनी अभ्यास को सामान्यकरण आधारमा काम आवश्यक छ।
प्राकृतिक monopolies रूस मा एक मजबूत स्थिति छ। समर्थन लागू गर्न बजार संरचना को र उद्यम नीति Antimonopoly नीति मा राज्य समिति द्वारा सिर्जना गरिएको थियो। 1999 मा, यसलाई नक्सामा विरोधी-एकाधिकार नीति टोलीहरू मन्त्रालय र उद्यमशीलता को समर्थन सिर्जना आधारित। तर, रूस मा प्रतिस्पर्धा को स्तर अझै पनि छैन पर्याप्त छ। यो कारण निजीकरण प्रभावकारी मालिकहरूको उद्भव नेतृत्व गरेनन् छ, उद्यम पुनर्गठन राम्ररी प्रयोग गरिएको छैन, र साना व्यवसायहरू अझै पनि पर्याप्त स्तरमा विकास छैन।
प्राकृतिक एकाधिकार अन्य होनहार को विकास गर्न रोकावट बन्न हुँदैन व्यवस्थापनको प्रकारका (- सानो र मध्यम कारोबार मुख्यतया)। तसर्थ, विशेषज्ञहरु आज रूस राज्य आवश्यकताको आपूर्ति लागि व्यापार, नीलामी, निविदा बढि कठोर antitrust निरीक्षण स्थापित गर्न आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छन्; राजधानी र सामान देश भर को आन्दोलन रोक्न क्षेत्रीय अधिकारीहरु प्रयासहरू विरुद्ध कारबाही गर्न; प्रतियोगिता को संभावनाहरु विस्तार गर्न सरकार विनियमन प्रयोग; को कानून मेल खान्छ सीआईएस देशहरुमा को मुद्दा मा विरोधी-एकाधिकार विनियमन।
अर्थव्यवस्था गरेर निर्णय गर्न चुनौती। चुनौतिहरु भेट्न अर्थव्यवस्था लागि सूत्र
कोटा - के छ र के आवश्यक छ?
सेन्ट पीटर्सबर्ग को सबै भन्दा ठूलो कम्पनीहरु
तालिका ब्रेक-पनि बिन्दु: कसरी निर्माण गर्न
Alexandrine सुगा - बौद्धिक र हँसिलो चटपटाउनु
बेड "Ormatek": ग्राहक समीक्षा
द्वन्द्वको आधारभूत अवस्था: विवादहरूमा व्यवहार नियम
दूरसंचार मंत्रिमंडल कसरी छनौट गर्न को लागी 19डेटा डेटा केन्द्र र डेटा केन्द्रहरुको लागी?
दबाइ "Laktum Filtrum": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक समकक्षों
युप्रिप्टप्लस पातहरू: अनुप्रयोग र विशेषताहरू